အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ။ သငျသညျအမြားစုက ဖြစ်ကောင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာဖွေ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနေသောကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုအများကြီးကမ်းလှမ်း တစ်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေနေ, အိုင်တီအရောင်းစျေးကွက်နှင့် ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ 80 ရာခိုငျနှုနျးကျြောအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများစော်ဘွားမှာမွေးဖွားကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအိန္ဒိယလူမျိုးနှင့်ပါကစ္စတန်ဧည့်သည်များမှာ ယူအေအီးအတွင်းအပြင်။ သူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ပါ။
သင်သာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင့်အီးမေးလ်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ထားရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့မှကောင်းစွာလုံလောက်စွာထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကခက်ခဲချည်နှောင်ဖို့လိုအပ် အလုပ်အကိုင်အများအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှာဖွေနေ. တစ်ခုတည်းသောအဖြေဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါပိုက်ဆံလည်းမရှိ။ အလွန်စမတ်လမ်း sign up ကိုနဲ့ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းသင့်ပါတယ် ဘယ်လိုယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှိသည်.
ဤမျှလောက်များစွာသောအလုပ်ရှာဖွေသူများအကြောင်းကိုကြော်ငြာတွေ့နိုင်ပါသည် ဘယ်လိုတစ်ဦးမှအလုပ်အဘို့သင်၏ CV dd. ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့သင့်ပါတယ်, ယနေ့သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန် sign up ကိုနဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏အိပ်မက်အလုပ်ရှာတွေ့. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယခုလောလောဆယ်တွင် အမျိုးမျိုးသောရာထူးများအတွက်စုဆောင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ကာတာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီး။ သို့သော်ကျနော်တို့စင်္ကာပူ, သြစတြေးလျ, ကနေဒါနှင့်နယူးဇီလန်ကနေတချို့တောင်းဆိုမှုများရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်ယေဘုယျနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးရာထူးအတွက်အထူးပြုနေကြသည်။ ထိုအခြင်းအပါအဝင်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, အိုင်တီနှင့် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာ. အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင့်အီးမေးလ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖို့ကွိုးစားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီး လတစ်လရဲ့အဆုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆန်ခါတင်စာရင်း သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပ်လုဒ်ကိုအပိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ယူပါ။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးမျိုးသော packages များကြည့်ယူသည်နှင့် ကိုက်ညီသောအရာကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်န်ဆောင်မှု။ ကျနော်တို့သြစတြေးလျား, နယူးဇီလန်, ကနေဒါနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးမြောက်မြားစွာပွင့်လင်းအလုပ်နေရာလွတ်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမြို့အသစ်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြေရှင်းချက်။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ်လိုက်ဖမ်း Start နဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ sign up ကိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တကွသင်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ယူအေအီး၌သင်တို့ကိုနေရာချနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ profile များကိုနှိပ်ပြီးအတိုင်းလိုက်နာ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့ပါ။ ယနေ့တိုက်ရိုက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ထုတ်စစ်ဆေးပါ။
သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာနေပါစေ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ကူညီနေတာပါ။ ဥပမာ, ပါကစ္စတန်ကနေလူတွေအလုပ်စတင်နိုင်နိုင်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာနေပါစေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ကတခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာကာတာနိုင်ငံနှင့်ဖြစ်ပါသည် ငှားရမ်းသူဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှ.
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Start မှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ!
သင်ဟာတစ်ဦးကယောဘကိုရှာစေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူစတင် !. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ဦးချင်းစီလျှောက်လွှာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ ကျနော်တို့ပေးနေကြသည်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုကမ်းလှမ်းမှု၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ် လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ယနေ့စတင်နိုင်ပါသည်။ Find သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုအလုပ် အမ်းမရိတ်၌တည်၏။ နှင့်ကျိန်းသေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ။ သင်စတင်သင့်သောအရပ်တို့ကိုမပင်လယ်ကွေ့အတွင်းငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက် Careerjet အလုပ်အကိုင်များ နှင့် ဒီစုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသရှိ Top။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
သင်သည်တတ်နိုင်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး Start!.
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးမှ !. ငါတို့သည်လည်းကူညီပေးနေကြပါသည် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်ရဖို့ Philipino ကျွမ်းကျင်သူများ.
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ - အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတစ်ဦးအလုပ်သစ်တစ်ခုစတင်ပါ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ 2019 ၌တည်နေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီသည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နေ့တိုင်း အလုပ်ရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင် ဒူဘိုင်းဘို့မသာ။ ဒါပေမယ့်လည်း GCC နိုင်ငံများအဘို့။ ထောက်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် 30 နိုင်ငံများထက် ပို. မှလာကြ၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေပညာရှင်များဆက်သွယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထား, ငါတို့အဖွဲ့ကဒေသဆိုင်ရာ Know-ဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Research နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရှာဖွေအကူအညီပေး ဒူဘိုင်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်.
သူတို့အခွအေနမြေိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပြောင်းလဲဘို့ကပထမရှေးခယျြမှုဖြစ်ရန်ဖြစ်ပါသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စုဆောင်းမှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေပလက်ဖောင်းဖွသောမျှော်လင့်ချက်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှာအလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာမွို့၌အံ့သြဖွယ်အလုပ်အခွင့်အလမ်းများအတွက်နေရာချခံရဖို့စကားပြော။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒူဘိုင်းအတွက်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ 1,000 ကျော်ရှိပါတယ်။
ဒူဘိုင်းတွင်သင်ယူအေအီးအတွက်စူပါကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တို့အဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက် Porsche အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ 2018 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းကြသူအများအပြားကုမ္ပဏီများမှလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ start ကိုကူညီဒီမှာပါ။ ရန်ရှာဖွေနေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး Start ?. စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ!
နေသမျှကာလပတ်လုံးအားလုံး4အဓိကစျေးကွက်အတွင်းအလုပ်လုပ်အားလုံးဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများကအဖြစ်: ထမ်းခေါ်ယူမှု, လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်, အစိုးရဂျော့ဘ်, အလုပ်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် ဒူဘိုင်း၌သင်တို့နေရာ။ မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ, အထူးသဖြင့်ယူအေအီး၌တည်၏။ ထို့ပြင်အလုပ်ရရန်စမတ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရန်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးကိုရှာဖွေ.
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့အကောင်းတစ်သုတသေနပွုအခါ။ သငျသညျကျိန်းသေစဉ်းစားသင့်တယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမဩဝါဒပေး။ ဤရွေ့ကားအလုပ်အကိုင်များအင်တာဗျူးရှောက်သွားဖို့ကိုရှာဖွေအမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးလွယ်ကူပါတယ်။ အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမြဲအသစ်အပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဖွင့်။ ဒါ့အပြင်အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝင်ငွေတစ်လျောက်ပတ်သောငွေပမာဏကိုရစေမယ့်စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်လည်းအလုပ်အတွက်အကောင်းတစ်ဦးဦးတည်ရာဖြစ်ကြ၏။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဖို့နေရာပြောင်းရွှေ့အမြဲတစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲတာဝန်ဖြစ်လာသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဒူဘိုင်းမှ Moving အစဉ်အမြဲအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုယူပြီး။ သင်ကကျော်ရရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခက်ခဲနေပါစေ။ အဆိုပါစနစ်အအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမဆိုတိုင်းပြည်အတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ အသုံးပြု. အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမယှဉ်နိုင်တဲ့အရင်းအမြစ်က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကိုထောက်ပံ့ပေး စော်ဘွားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျနော်တို့ပြောင်းလဲနေသောနှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝပို့စ်တင်နေကြလို့ပဲ။ ကိုယ့်ကိုသင်ကူညီပေးရန် အသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ ယောဘသည်ရှာဖွေနေပလက်ဖောင်းဒူဘိုင်း၌ရှိသောကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ profile များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီများကအသစ်တစ်ခုကိုဝန်ထမ်းရရှိရန်ကူညီပေးခြင်း။ ထိုအဘို့ ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုတေသနပြုအကျိုးရှိစွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
လူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှလာမယ့်ကျော်ထံမှပြည်ပရှိ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာ အလုပ်ရှာဖွေဘို့ယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ် နှင့်အဆုံး၌, သူတို့ကိုသာ 20% အလုပ်အကိုင်ရတဲ့။ ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့ရှာဖွေနေကြသူအသစ်များကိုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်လျှင်။ သငျသညျစူပါခက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အသစ်သောစီမံကိန်းများအတွက်ရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအလုပ်ရှာဖွေသူတို့နှင့်အတူကူညီခြင်းကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှအောင်။ ပြည်ပရှိ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုရှိသမျှသောနေရာခက်ခဲအလုပ်လုပ် ကျနော်တို့ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အိန္ဒိယသို့မဟုတ် South အာဖရိကမှနေပါစေသူတို့ကလျှင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူအပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်။ အထူးကုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုလည်းဖန်တီး ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ ထိုအတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒီယူအေအီးအတွက် 20,000 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကျော်ကူညီပေးခဲ့တယ်။
ပံ့ပိုးမှုနှင့်အစီရင်ခံ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူ အဓိကအရာဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းအရာများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့, အလုပျအတှကျအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်စဉ်းစားသင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ။ ဒါဟာချင်ပါတယ်သူကလူတို့အဘို့ထဲကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားခံရဖို့.
နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ 150,000 + ကျော်ကူညီပေးခဲ့တယ် ကမ္ဘာတဝှမ်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ 70 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကျော် ရက်မှစ. ယခုတိုင်အောင်လာမယ့်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းသင်ကမ်းလှမ်း ခြွင်းချက်အခွင့်အလမ်းများ ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပရိုဖိုင်းကိုတညျဆောကျရုံသင့်ရဲ့လုပ်အားခစာရင်းပြုမှတကယ်တော့တန်ဖိုးရှိသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိသည့်အခါ။
သြဇာထင်မြင်ချက်ခေါင်းဆောင်များသည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုသာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးစက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်နှလုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်လုံလောက်အောင်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပါက။ သငျသညျကျိန်းသေအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမြားစု၏ အိန္ဒိယလုပ်သားများသည်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်လို။ သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံမှလာလျှင်ဒီတော့သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး Start နဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
မှားစုဆောင်းဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပို့စ်တင်သင်၏အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။ ကသာလျှင် post ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ သငျသညျဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်နည်းလမ်းရှာနိုင်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစူပါအစာရှောင်ခြင်းကိုစတင်ပါ။ ဒူဘိုင်းမြို့ဟာအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အသက်ရှင်ဖို့ရာအရပျနှငျ့အလုပျဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာအလုပ်ရနှင့်သင့်အသက်တာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျလှုပ်ရှားမှုတိုင်းအပေါ်အလွန်စမတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား သငျသညျအလုပျတဆင်းသက်ရန်ကူညီပေးသည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်ပါသည်.
ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 500 CV ကိုရဲ့အပေါ်စစ်ဆေးနေ။ ဒါဟာသင်, အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်သည့်အနုတ်လက္ခဏာဘက်ပေါ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ 95 ကျော်% အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူပွဲချင်းပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ချင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယကနေအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး Get. အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ။
ထိုသို့ပြုမှအသံအဖြစ်ဒါမှလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ဆိုပါက။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတိုင်းစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ကိုရောက်ရှိနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးနေကြောင်းအပေါ်အခြေခံထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်လျှောက်လွှာအလွန်ဂရုတစိုက် check လုပ်ထားပါပြီ။ သင်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်ရှာဖွေသူ နှင့်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်တစ်ဦးအလုပ်ရရန်သင့်ကိုကူညီနိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ များစွာရှိပါသည် သင်က Google နိုင်ပါတယ်အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်ပြုလုပ်ရုံ၏ CV ကိုပေးပို့ဖို့တဝိုက်3လအတွင်းယူပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အခြား3လအတွင်းရုံမှသင်၏လျှောက်လွှာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ သို့သော်ငြားလည်း, ရှာဖွေစုဆောင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာ 8-12 ရက်သတ္တပတ်န်းကျင်ရှိသည်။ သို့သျောလညျးကိုနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အပင်မဟုတ်တော့ယူနိုငျသညျ။
ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဆုပ်ကိုင်အလုပ်အကိုင်အစာရှောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များလမ်းညွှန်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသုံးပြု. အလွန်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ WhatsApp ကို ဒူဘိုင်းအုပ်စုများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အုပ်စုများဖန်တီးထားသည်။ ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားခံရဖို့အသစ်များကိုကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ နယူးစုဆောင်းမှုတောင်းဆိုမှုကိုဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအပေါ်နေ့စဉ် posted.
အဆိုပါ Whatsapp ဒူဘိုင်း အုပ်စုတစ်စုလင့်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နေကြသည်။ အထူးသဖြင့်အကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံရှိခြင်းနေသောလူများအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်လျှင် MBA ဘွဲ့ရရှိခြင်းကိုသင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်အမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းအတွက်မြင့်မားတဲ့ paid အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကောင်းစွာ WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းမှာပဲသိကြအဖြစ်မှန်၌တည်ရှိ၏။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းအကြောင်းပြောနေတာပါက.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏စစျဆေးနိုငျ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက် WhatsApp ကို အပိုင်း။ ထိုအနိုင်ငံအများအပြားကရန်သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပို့စ်တင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်များအပေါ်။ Whatsapp စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များ၏တပြင်လုံးကိုအုပ်စုတစုစစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့်။ သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးငှားရမ်းထားသူမဟုတ်နိုင်ရနိုင်သူကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး Start !.
အခြားစမတ်လမ်း ဒူဘိုင်းအတွက်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ။ အတော်ကြာကုမ္ပဏီများအားဤမျှလောက်လျှောက်လွှာပေးပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်နေရာကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည် ဒူဘိုင်းမြို့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများ။ အဲဒီမှာအဖြစ်မှန်အတွက်အလုပ်အကိုင်အအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကမ်းလှမ်းဤမျှလောက်များစွာသောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ဖန်တီးထားပါတယ် ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏ပရိုဖိုင်းကိုစျေးကွက်တစ်ခုလမ်းညွှန်။ လှုံ့ဆျောမှုယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အတှေ့ရမယ့်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မိုဘိုင်းဖုန်းအလုပ်အကိုင် ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတဲ့စမတ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်ရှာဖွေနေ။ ငါတို့သည်လည်းကူညီပေးနေကြပါသည် တောင်အာဖရိကအမျိုးသမီးများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ဒူဘိုင်းအတွက်သူတို့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ဤကြင်နာတန်ဖိုးထား။